Iindaba -Luphi uphuhliso lwamva lweshishini lezixhobo zase China?
Luphi uphuhliso lwexesha elizayo lweshishini lezixhobo lase China?
Imakethi yeshishini lezixhobo zaseTshayina ifumene indawo ebambekayo ngexesha le-12 leminyaka yesiCwangciso seMinyaka emihlanu kwaye iyaqhubeka nokwanda. Liye laba sisixhobo esisemgangathweni kwilizwe jikelele, kodwa kwixa elizayo. Ngexesha, ulwakhiwo lweemarike luya kutshintsha kakhulu. Ke ngawaphi amathuba kwintengiso yezixhobo zaseTshayina? Luphi uphuhliso oluzayo?
Okokuqala, ukuphucula ngakumbi iteknoloji yezixhobo kunye nenqanaba e-China, uhambelane notyekelo lophuhliso lwamashishini, kwaye uqhubeke ngakumbi ukuphuhlisa izixhobo kunye neemitha ngelixa uphucula iintlobo eziqhelekileyo. Idijithali yoshishino, ubukrelekrele kunye nokudityaniswa. Ukusetyenziswa kwetekhnoloji entsha kubalulekile, njengokusebenzisa isantya sokulawula isantya esiguqukayo, iimoto ezintsha, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, ii-micro piezoelectric ceramic I / P converters, iteknoloji yonxibelelwano ngeBluetooth, ubukrelekrele kunye nebhasi yentsimi kunye nezinye iitekhnoloji ezintsha zokuphucula ii-actuator ezifanelekileyo njl njl.
Okwesibini, ukuphucula ngakumbi umgangatho kunye nokuthembeka kwemveliso yezixhobo zase China. Icandelo lezixhobo lase China liya kuphucula ukuthembeka, ukusebenza kunye nokusebenza kweemveliso zalo kwixa elizayo. Ngapha koko, kwezinye iindawo zeemveliso, iimveliso zaseChina ezizenzele zona ziye zafikelela kwimigangatho yamazwe ngokusebenza kunye nokusebenza, kodwa ziphantsi kancinci ekuthembekeni nasekulungelelanisweni. Le yeyona nto ingumqobo omkhulu ekufuneka usonjululwe kuphuhliso lwexesha elizayo lweshishini lezixhobo lase China, ukuze kwenziwe izixhobo zasekhaya zikhuphisane ngakumbi kurhwebo lwamanye amazwe.
Okwesithathu, ukuqhubela phambili ukutyebisa ukucaciswa kwezixhobo, ezinje ngoxinzelelo oluncinci olusezantsi kwe-1kPa, uxinzelelo oluphezulu lokwahlula ngaphezulu kwe-800kPa, uxinzelelo oluphezulu lwe-tuli ngaphezulu kwe-16MPa, ukumelana nokubola, njl.njl. Ezi mveliso, ezihlangabezana neemfuno zezicelo ezithile, zinokuthintelwa kakhulu kwisicelo sazo ukuba azinakuveliswa.
Ezine zandisa ukwanda okuzenzekelayo kunye nokuchaneka kwemveliso. Iqondo lokuzenzekelayo kwezixhobo e-China aliphezulu ngokwaneleyo, kwaye ezinye zifuna ukusebenza ngesandla. Kwindlela yanamhlanje yokusetyenziswa kwetekhnoloji yeekhompyuter, ukulungiselela ukufezekisa ukusebenza ngokukuko kunye nokunciphisa uxinzelelo lwabasebenzi, kuyafuneka ukuba uqhubeke nokuphucula umgangatho wokuzenzekelayo kwezixhobo zetekhnoloji yekhompyuter. Ukuchaneka kwemilinganiselo kufuneka kwakhona kuphuculwe ngokuthe chu, njengokuhamba kweemitha, izixhobo zokubala, iimitha, njl., Ukuchaneka okuphezulu kunokwenza isixhobo sithembeke ngakumbi, kwaye uluhlu lwesicelo lubanzi.
5. Ukuphucula isabelo sentengiso yezixhobo zase China kwimakethi ephezulu. Okwangoku, iimveliso zezixhobo zase China ikakhulu zijolise kurhwebo oluphakathi kunye nolusezantsi, ngelixa intengiso ephezulu isetyenziswa ikakhulu ziimpawu zangaphandle. Kweminye imimandla ephezulu, iimveliso zasekhaya zingenanto, efuna ikamva lezixhobo zase China ukungena kwimakethi ephezulu kunye nokwandisa isabelo sentengiso seemveliso eziphezulu. Emva kokuphuhliswa kwezixhobo zasekhaya kunye neemitha kwicandelo lobuchwepheshe, ukusebenza, ukuthembeka, umgangatho, oomatshini, ngqo, isiphelo esiphezulu, njl, isabelo sentengiso seshishini lezixhobo lase China ngokuqinisekileyo liya kunyuka.
Ixesha Post: Apr-16-2019